स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति गराए गाउँपालिकाले २ हजार भत्ता दिने - मूल्याङ्कन अनलाइन
माघ २७, सल्लेरी, सोलुखुम्बु
महाकुलुङ गाउँपालिका सोलखुम्बुले मान्यताप्राप्त स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति गराउने आमालाई प्रोत्साहन भत्ता दिएको छ ।
सोही निर्णयअनुसार एक महिनाको अवधिमा २ जना आमाले भत्ता बुझिसकेको गाउँपालिकाका स्वास्थ्य सहसंयोजक हरिप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए ।
सरकारले प्रदान गर्दै आएको रु. १ हजार ५०० र गाउँपालिकाको तर्फबाट प्रदान गर्ने रु. २ हजार गरी जम्मा रु. ३ हजार ५०० भत्ता सत्केरीले बुझेका छन् । यस्तै, अन्यत्र पठाउनु परेमा सरकारको तर्फबाट रु. ५०० र गाउँपालिकाको तर्फबाट रु. २ हजार गरी जम्मा रु. २ हजार ५०० भत्ता पाउने छन् ।
साविक छेस्काम, बुङ र गुदेल गाविसलाई मिलाएर बनाएको महाकुलुङ गाउँपालिकाको ३ वटा स्वास्थ्य चौकीमध्ये गुदेल स्वास्थ्य चौकीमा मात्र बर्थिङ सेन्टर सञ्चालनमा रहेको छ । साविकको छेस्काम र बुङमा समेत बर्थिङ सेन्टर सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधारको तयारी अगाडि बढाइएको गाउँपालिका अध्यक्ष सागर किरातीले जानकारी दिए ।
थुलुङ दूधकोशी गाउँपालिकाले भने अस्पतालमा प्रसूति गराउनेलाई रु. ५ हजार र बर्थिङ सेन्टरमा प्रसूति गराउनेलाई रु. ३ हजार ५०० प्रदान गर्ने निर्णयको गत माघ ५ गतेदेखि कार्यान्वयन भएको छ ।
५ जनाको परिवारलाई सरकारले स्वास्थ्य स्वयंसेविका भएकाले दिएको छुटपछि प्रिमियम तिर्नुपर्ने रकम रु. २ हजार २५० गाउँपालिकाले तिर्ने भएको हो । यस्तै महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई कामको मूल्यांकनका आधारमा प्रोत्साहन भत्ताबापत एक जनालाई वार्षिक रु. १० हजार दिने भन्दै बजेटसमेत विनियोजन गरेको छ ।
« ‘काँग्रेसले ५ वर्षसम्म सत्ता मोह त्याग्नुपर्छ’ (Previous News)
(Next News) ५ वर्षअघि बनेको मध्यपहाडी लोकमार्गमा अझै गाडी गुडेन, स्थानीय आक्रोशित »